Maxaa laga og yahay qaraxyadii Hotel Central ee magaalada Muqdisho? - Wargane News
Home Somali News Maxaa laga og yahay qaraxyadii Hotel Central ee magaalada Muqdisho?
Maalintii shalay ee Jimcadda waxaa weerar muddo laga soo shaqeynaayey lagu qaadey Hotel Central oo kaabiga ku haya Villa Somalia Waxaana hotelka inta badan dega inta Wasiiro Xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo badan. Waxaana la aaminsan yahay in amniga Hotelku yahay kan Madaxtooyada oo kale inkasta uu yahay goob ganacsi, waana sababta uu ku soo jiitey dadka siyaasadda ku jiraa in ay saldhg ka dhigtaan.
Marka la eego dadka ku dhintey ama ku dhaawacmey, waxay muujineysaa sida Hotelku u ahaa mid amnigiisa la isku haleeyey oo ay daaradiisa ku tukan karaan dad madax ah sida Raysalwasaare ku-xigeenka ahna kusimaha Raysalwasaaraha Maxamed Cumar Carte Qaalib.
YAA FULIYEY WEERARKA?
Ilaa hadda waxa la ogyahay in Weerarkan uu ahaa mid ay fuliyeen dad ka mid ah Hotelka deganaa oo shaqaale ka ahaa. Markala eego qaabka loo fuliyey weerarkan oo ka duwanaa kuwii hore oo ahaan jirey gaari la soo kaxeeyo oo albaabka lagu dhufto.
Waxaa qaraxa fuliyey nin iyo naag is qaba, waxaa wararku sheegayaan in gabadha is qarxisey ay deganaan jirtey dalka Holland ma ahan war la xaqiijiyey afhayeen u hadley Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Holland ayaa sheegey in warkaas ay ka maqleen warbaahinta.
Muddo ayey ka shaqeyneysey gabadhu Hotelka ay weerarka ku qaadey waxaana magaceeda lagu sheegay Luul Axmed Nuur. Ninka weerarka gabadha la fuliyey ee qabey ayaa ka mid ahaan jirey dadkii deganaa Hotelka,sida ay sheegayso mid ka mid ah wabixinada Wargane helayo.
Waxaa ilaa hadda la og yahay in qaraxyadu ahaayeen labo, ninka qabey gabadha ee is qarxiyey ayaa la sheegayaa markii salaadda Jimcaha laga baxayba uu galay gaariga oo isku dhex-qarxiyey, waana halka dhimashada ugu badan sababtey, waxaana soo dhinac ka mid ah derbiyada Masaajidka.
Gabadha oo xirneyd suunka qaraxyada loo isticmaalo ayaa banaanka isku qarxisey, waxaana wararku sheegayaan in bar-tilmameedkeedu ahaa marka dadku ka soo cararaan dhanka gaariga qarxay in ay isku dhex qarxiso laakiin waa ka khasaaro yarayd qaraxa ninkeedu waxyeeladu uu geystey, waxaana madaxeeda laga soo qaadey meel fog halka ay isku qarxisey.
Sida muuqata weerarkan ayaa ah mid ka duwan kuwii hore, waxaana fuliyey dad la aaminey, su’aasha isweydinta mudan ayaa ah maxay xilligan ugu soo beegeen? Raysalwasare kuxigeenka Federaalku intee Jimce ayuu ku tukadey Masjidka la weeraray?, maxaase iska bedeli doona amniga HOteelada marka la eego cidda weerarka fulisey?.
MAXAA LA QABTEY ILAA HADDA?
Amniga Hotelka waxaa la wareegey hay’adda NISA, waxaa la xirey dhamaan shaqaalihii Hotelka oo uu ku socdo baaritaan, Hotelka ayaa sababo gaar ah in badan oo shaqaalihiisa ah kala yimid magalada Hargeysa sida ay sheegayaan dadka macmiilka ka ahaa Hotelka.
Golaha Wasiirada aya habeenkii xalay yeeshay shir deg-deg ah, waxaana shir guddoominaayey Madaxweyne Xasan Shiikh iyada oo Raysalwasaare CUmar dalka ka maqan yahay halka ku-simihiisina uu ku dhaawacmey weerarka, shirka waxaa ka soo baxay:
Waxaa nasiib darro ah in weeraro badan oo caynkan ah ay dhaceen guddiyo loo saareyna aysan shacabka la wadaagin wixii baaritaanadaas ka soo baxay habayaraatee, waxaana dad badan is weydiinayaan waxa uu kaga duwnaan karo baaritaanadii hore iyo guddiyadii hore ee aan soo saari jirin jawaabta la sugaayo.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatey ay ku jiraan Xildhibaano, Isimo, Agaasimayaal iyo Siyaasiyiin kale, waxaa ku dhaawacmey dad ka badan 40 qof oo uu ku jiro Raysalwasare ku-xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib.